बदलिँदो काठमाडौंको लोभलाग्दा १० दृश्य ! (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
बदलिँदो काठमाडौंको लोभलाग्दा १० दृश्य ! (भिडियोसहित)
बदलिँदो काठमाडौंको १० दृश्य
काठमाडौं । यो केही दिन अघि मात्रै मर्मत तथा विस्तार सकिएको कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्ड । आहा ! क्या सुन्दर र सफा देखिएको छ । ८ लेनको भव्य र सुविधायुक्त यो सडकले सहरको सौन्दर्य मात्रै बढाएको छैन । पैदलयात्रु, सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गर्नेहरु, सवारीसाधन चालक र सडक आसपासका नागरिकलाई उल्लेख्य सुविधान भएको छ ।
कुनै विकसित मुलुकको झल्को दिने यो सडक विस्तारका लासगि चीन सरकारको ५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । १० दशमलव ३९ किलोमिटरको यो सडकखण्ड निर्माण हुनुपूर्व आमउपभोक्ताले खुसी सास्तीको सामना गर्नुपरेको थियो ।
अहिले न ट्राफिक जाम हुन्छ, न धूलोधुँवा नै उड्छ । सडक सुविधा भोग्नेसँगै सडक आसपासका नागरिकमा अहिले खुसी छाएको छ । गर्ने हो भने विकास सम्भव रहेछ भन्ने संकेत दिएको छ, कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्ड विस्तारले ।
दृश्य नम्बर दुईः अनामनगर–गौशाला सडक खण्ड
सफा सडक । सडक किनारमा बगैंचा । देख्दै लोभलाग्दो बनेको छ, अनामनगर–गौशाला सडक खण्ड । केही समयअघिसम्म यो सडक खण्ड खाल्डाखुल्डीयुक्त, फोहोर र अस्तव्यस्त थियो । अहिले यस्तो भएको छ ।
दृश्य नम्बर तीनः कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडक खण्ड
कोटेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्मको यो सडक । फराकिलो र सफा । सडक किनारमा प्रशस्त पैदलयात्रु हिँड्ने ठाउँ । ठाउँठाउँमा आकाशे पुल । सडकबीचमा बगैंचा । साँच्चै, सुन्दर देखिएको छ, यो सडक खण्ड ।
जापान सरकारको सहयोगमा यो सडक सन् २०११ मा मर्मत तथा विस्तार सम्पन्न भएको हो । ६ लेनको यो सडक बन्नपूर्व यहाँको स्थिति जर्जर थियो । घण्टौंसम्म ट्राफिक जाम हुन्थ्यो । धुलोधुँवाले आक्रान्त थिए, सडक उपभोक्ता । सडक विस्ता भएपछि उपभोक्तालाई निकै सहज भएको छ ।
र, अब तिनकुनेदेखि सूर्यविनायकसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणको तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि कोटेश्वरमा बढेको ट्राफिक जाम पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दृश्य नम्बर चारः माइतीघर–कोटेश्वर सडक खण्ड
६ लेनको फराकिलो सडक । सडकको बीचमा हरियो बगैचा । सडक आसपासमा पनि विभिन्न रुखविरुवा ।
सडक दायाँबाँयाँ प्रशस्त फुटपाथ । धुलोधुँवा छैन । पिक आवरबाहेक ट्राफिक जाम पनि कम भएको छ । यो सडक खण्डले काठमाडौंलाई निकै सुन्दर बनाएको छ ।
दृश्य नम्बर पाँचः कलंकीको सुरुङमार्ग
यो कलंकीमा नवनिर्मित सुरुङ मार्ग । अति व्यस्त कलंकीमा निर्मित यो सुरुङमार्गले यहाँको स्वरुप नै फेरिएको छ । सुरुङमार्ग बनेपछि कलंकीमा भोग्नुपर्ने अत्यासलाग्दो ट्राफिकजामबाट यात्रु तथा सवारीचालक मुक्त भएका छन् ।
थप पाँच दृश्य
दृश्य नम्बर छः सफा हुँदैछ सहर
क्रमशः काठमाडौं सुफा हुँदैछ । सुन्दर देखिँदैछ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठाउँठाउँमा स्मार्ट डस्टबिन राखेको छ । जसले वायु प्रदूषण पनि मापन गर्छ । यो डस्टबिन राति बल्छ, सहर झलमल्ल देखिन्छ । यससँगै महानगरपालिकाले सहर सफाईलाई निकै महत्व दिएको छ । केही समयअघिजस्तो सडक दायाँबायाँ जताततै फोहोरको डङ्गुर देखिँदैन । सडक आसपासका रुख बिरुवामा दिनहुँजस्तो पानी हाल्ने गरिएको छ । यसले पनि सहरलाई थप सफा बनाएको छ ।
दृश्य नम्बर सातः वायु प्रदूषण घट्दो छ
देखिने काम नगरेको भनेर आलोचना खेपिरहेको काठमाडौं महानगरपालिका अहिले ‘नो मा्रक्स सिटी’ बनाउन लागिपरेको छ । वायु प्रदूषण घटाउन धेरै धुँवा फाल्ने सावरीसाधन क्रमशः विश्थापित हुँदैछ । सडकका प्रायः खाल्डाखुल्डी पुरिएको छ । जसले धुलो घटाएको छ । सडकको धुलो कम गर्न महानगरपालिकाले ब्रुमर चलाउन थालेको छ । गल्लीगल्लीका साना सडक कालोपत्रे भएको छ । जसकारण अहिले सर्वसाधारणदले अनुभूत नै गर्ने गरी काठमाडौंको वायु प्रदूषण कम भएको छ ।
दृश्य नम्बर आठः बुद्धनगरमा आर्क ब्रिज निर्माण
बुद्धनगरमा निर्माणाधीन यो नेटवर्क आर्क ब्रिज । यसको निर्माण करिब सकिएको छ । देशकै नमुना भनिएको यो पुल बनिसकेपछि यस क्षेत्रको ट्राफिक जाम कम हुने निश्चित छ । यो पुल बनिसकेपछि सुन्दर पनि देखिने छ ।
१३ करोड १३ लाख ८५ हजार रुपैयाँको लगानीमा यो पुलन निर्माण भएको हा । यससँगै तिनकुनेमा अर्को पुल निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।
दृश्य नम्बर नौः लोडसेडिङ हटेपछि झलमल्ल काठमाडौं
अहिले काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुँदैन । केही वर्षअघिसम्म कुनै बेला यहाँ १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । जतिबेला लोडसेडिङमुक्त काठमाडौंको कल्पनासमेत हावादारी जस्तो लाग्थ्यो । तर, अहिले काठमाडौंमा बिजुली जाँदैन । जसकारण काठमाडौबासीको दैनिकी सहज भएको छ । यसको श्रेय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङलाई जान्छ ।
दृश्य नम्बर दशः अस्तव्यस्त ट्राफिक जाम कम भएको छ
काठमाडौंमा ट्राफिक जाम नै कम त भएको छैन, तर अस्तव्यस्त जाम, क्रमशः व्यवस्थित हुँदैछ । सडक विस्तार, पुल निर्माण, सुरुङ निर्माण आदिले ट्राफिक जाम कम भएको छ । यसले काठमाडौंबासीको दैनिकी तुलनात्मक रुपमा सहज भएको छ ।